Kukho ama-HBCU aneminyaka emine e-United States; ezi zizinto ezilungileyo.
Iikholeji zamnyama okanye i-universities, okanye ii-HBCU, zisekelwe ngokusesikweni ngenjongo yokubonelela ngamathuba aphakamileyo emfundo kumaAfrika aseMerika xa ukuhlanjululwa kwakusoloko kwenzile amathuba anjalo. Ama-HBCU amaninzi asekelwe ngokukhawuleza emva kweMfazwe Yomphakathi, kodwa ukuqhubeka nokungalingani ngokobuhlanga kwenza umsebenzi wabo ufanele namhlanje.
Ngezantsi zilishumi elinanye kwiikholeji ezimnyama zembali zamnyama kunye neeyunivesithi e-United States. Izikolo eziluhlu zikhethwe ngokusekelwe kwimilinganiselo yokugqitywa kweminyaka emine kunye neyesithandathu, amazinga okugcina, kunye nexabiso elipheleleyo lezemfundo. Gcina ukhumbule ukuba ezi ndlela zikhetha izikolo ezininzi ezikhethiweyo kuba abafakizicelo beekholeji abanamandla banakho ukuphumelela kwikholejini. Kwakhona uqaphele ukuba iindlela zokukhetha ezikhethiweyo apha zingenakukwazi ukuzenza ezintle iimpawu eziza kwenza ikholeji ibe ngumdlalo omhle kwimigangatho yakho yemfundo, yemfundo kunye nemisebenzi.
Esikhundleni sokunyanzelisa izikolo ukuba zibekwe kwindawo engabonakaliyo, zifakwe kwi-alfabheti. Ayinakuqonda ukuba uqhathanise ngokucacileyo iyunivesiti enkulu kawonkewonke njengeNorth Carolina A & M kunye nekholeji encinci yamaKristu njengeKholeji yaseTougaloo. Oko kwathiwa, kwiinkcukacha ezininzi zelizwe, i-Spelman College kunye neYunivesithi yeYunivesithi bathambekele phezulu kwizinga eliphezulu.
IWingley Memorial Hall eYunivesithi yaseClaflin. Ammodramus / Wikimedia Commons / CC0 1.0
Eyasungulwa ngo-1869, iYunivesithi yaseClaflin yiyona yeyona HBCU endala eNingizimu Carolina. Iyunivesithi yenza kakuhle kwi-front aid yangaphambili, kwaye phantse bonke abafundi bafumana uhlobo lwe-grant aid. Ibha ye-admissions ayikho ephakamileyo njengezinye izikolo kuloluhlu, kodwa ngabafakizicelo bezinga lokumkela i-42% baya kufuna ukubonisa amandla abo okufaka isandla kwiqela le-campus kwaye baphumelele kwizifundo.
Indawo: Orangeburg, South Carolina
Uhlobo lweziko: I -univesithi yobuninzi bobugcisa be-univesithi ebambene neCawa yama-Methodist
Ubhaliso: 1,978 (i-1,905 iiporogram)
I-FAMU Areballball Arena. Rattlernation / Wikimedia Commons
IYunivesithi yezoLimo yaseFlorida kunye neMechanical , iFlorida A & M okanye i-FAMU, enye yeyunivesithi zikarhulumente ezimbini kuphela ukwenza olu luhlu. Isikolo siphumelela amanqaku aphezulu kubafundi baseMerika baseMelika basebunzululwazi kunye nobunjineli, nangona i-FAMU ingaphezulu kwemigangatho ye-STEM. Ibhiziniselwano, udaba lwezobhengezo, ubulungisa bobugebengu, kunye neengqondo ziphakathi kweentloko ezidumileyo. Izifundo ziyaxhaswa ngumlinganiselo we-15 ukuya ku-1 womfundi / umgaqo-faculty. Kwiimidlalo, i-Rattlers incintisana kwiCandelo le-NCAA I-I-Mid-Eastern Athletic Conference. I-campus iimbalwa ezimbalwa ukusuka kwi- University of Florida State University .
Uhlobo lweZiko: IYunivesithi kaRhulumente
Ubhaliso: 9,619 (7,769 izifundo zakudala)
ICawa yeSikhumbuzo kwiYunivesithi yaseFitton UDouglas W. Reynolds / Wikimedia Commons / CC BY-SA 4.0
Ifumaneka kwikampus ekhangelekayo yamanzi kwintshona-mpuma yeVirginia, iYunivesithi yaseFitton inokuziqhayisa ngezifundo eziqinileyo kunye nomlinganiselo wesigidi 13/1 somfundi / i-faculty ratio kunye ne-NCAA Division I i-athletics. I-Pirates ikhuphisana kwiNgqungquthela ye-Middle-Athletic Conference (MEAC). Iyunivesithi yasungulwa ngo-1868 kungekudala emva kweMfazwe yaseMelika. Iiprogram zezemfundo kwi-biology, ishishini kunye neengqondo ziphakathi kwezona zidume kakhulu.
Indawo: Hampton, Virginia
Ubhaliso: 4.646 (3,863 izifundo zakudala)
Abalungu beLayibrari kwiYunivesithi yaseWoward Flickr Umbono / Getty Izithombe
IYunivesithi yaseHoward ngokuqhelekileyo ikwahlula phakathi kwe-HBCU okanye enye ye-HBCU, kwaye ngokuqinisekileyo ineemigangatho ekhethiweyo yokumkelwa, enye yezinga eliphezulu kakhulu lokugqweswa kwezifundo, kunye nesibonelelo esikhulu kunazo zonke. Kwakhona enye ye-HBCU ebiza kakhulu, kodwa iikota ezintathu zabafaki zicelo zifumana uncedo lwe-grant ngomvuzo ophakathi kwama-20,000. Izifundo zixhaswa ngumyinge obalaseleyo we-8 ukuya ku-1 womfundi / umgaqo-faculty .
Indawo: ISithili sase-Columbia
Ubhaliso: 8,966 (5899 izifundo zakudala)
Yunivesithi yakwaJohnson C. Smith
Yunivesithi yakwaJohnson C. Smith. James Willamor / Flickr
IYunivesithi yaseYohnson C. Smith yenza abafundi abaqeqeshwayo nabafundi abagqibeleleyo abahlala bekulungele ukulungiselela iikholeji xa beqala ukufundisa. Isikolo sizuza amanqaku aphezulu kwiziseko zeteknoloji, kwaye yi-HBCU yokuqala ukubonelela ngamnye umfundi ngekhomputha yekhomputha. Izifundo zixhaswa ngumlinganiselo we-11 ukuya ku-1 womfundi / ubuchule, kunye neenkqubo ezibonakalayo zobugebengu, umsebenzi wezenhlalakahle kunye ne-biology.
Indawo: Charlotte, North Carolina
Ubhaliso: 1,428 (1,326 izifundo zakudala)
Graves Hall e-Morehouse College. Thomson200 / Wikimedia Commons / CC0 1.0
I-Morehouse College ineenkalo ezininzi ezibandakanya nokuba yinye yeekholeji zezilwanyana kuphela e-United States. I-Morehouse ngokuqhelekileyo iyahlula phakathi kweekholeji ezimnyama kakhulu zembali, kwaye amandla esikolweni kwi-liberal nobugcisa be-liberal ayifumana isahluko se- Phi Beta Kappa .
Uhlobo lweZiko: ezizimeleyo zezobugcisa zobuninzi beekholeji
Ubhaliso: 2,108 (zonke iidanga lokugqibela)
UMichelle Obama uthetha eNyakatho Carolina A & T. USara D. Davis / Getty Izithombe
IYunivesithi yaseNorth Carolina yezoLimo nezobuGcisa yinye yeziko le-16 kwiziko leYunivesithi yaseNorth Carolina. Ngenye yee-HBCU ezinkulu kakhulu kwaye unikezela ngeenkqubo ezingaphezulu kwe-100 ze-grade-grade degree ezixhaswa ngumlinganiselo we-19 ukuya ku-1 womfundi / umgaqo-faculty. Izikhundla ezigqithiseleyo zihlala kwimimandla kwenzululwazi, kwizenzululwazi zentlalo, kwishishini, kunye nobunjineli. Iyunivesiti ine-acre e-acre e-200 kunye neefama ezingama-600. I-Aggies incintisana kwiCandelo le-NCAA I-I-Mid-Eastern Athletic Conference (MEAC), kwaye isikolo sithatha isiqheno kuMatshini weBlue & Gold Marching Machine.
Indawo: Tuskegee, Alabama
Uhlobo lweziko: Iyunivesithi yoluntu
Ubhaliso: 11,177 (9,668 abaphumelele kwizifundo eziphantsi)
I-Spelman College Graduation. U-Erik S. Lesser / Getty Izithombe
Ikholeji yaseSpelman inezinga eliphezulu kakhulu lokugqweswa kwezifundo kuzo zonke i-HBCUs, kwaye le kholeji yowesifazane ibamba amanqaku aphakamileyo ekuhambeni kwezenhlalakahle - Abaphumelele iSpelman bathambekele ekwenzeni izinto ezintle ngobomi babo; Phakathi kweentlobo ze-alumnae ngu-novelist u-Alice Walker, umculi uBernice Johnson Reagon, kunye namagqwetha amaninzi aphumeleleyo, ezopolitiko, abaculi, abafazi bezoshishino kunye nabadlali. Izifundo zixhaswa ngumlinganiselo we-11 ukuya ku-1 womfundi / ubuchule be-faculty, kwaye abafundi abangama-80% bafumana inkxaso-mali. Ikholeji iyakhethi, kwaye malunga nesithathu kubo bonke abafaki zicelo bayamkelwa.
Uhlobo lweziko: I- Private private-female femal arts college
Umqhubi weWowworthworth Chapel eKholeji yaseToualo. Social_Stratification / Flickr / CC BY-ND 2.0
Ikholeji yaseTougaloo yenza kakuhle kwi-front front: ikholejini encinci inexabiso eliphantsi eliphantsi kwexabiso, kodwa phantse bonke abafundi bafumana inkxaso encedo kakhulu. i-biology, ukunxibelelana ngobuninzi, i-psychology, kunye neentlalo ziphakathi kweentlobo ezidumileyo, kwaye izifundo zixhaswa ngumlinganiselo we-11 ukuya ku-1 womfundi / umgaqo-faculty. Ikholejini iyichaza ngokuthi "icawa inxulumene, kodwa ingekho icawa elawulwayo," kwaye igcine inxaxheba yonqulo ukususela ngo-1869.
Indawo: Tougaloo, Mississippi
Uhlobo lweZiko: Iikholeji zobungcali ezizimeleyo ezizibandakanya neCawa yase-United Church
Ubhaliso: 860 (843 izifundo zakudala)
IHolo Elimhlophe kwiYunivesithi yaseTuskegee. Buyenlarge / Getty Izithombe
IYunivesithi yaseTuskegee inamabango amaninzi ekudumeni: yaqala ukuvula iingcango zayo phantsi kobunkokheli beBooker T. Washington , kunye nabalandeli abadumileyo kuquka uRalph Ellison noLionel Richie. Iyunivesithi yayisekhaya leTuskegee Airmen ngexesha leMfazwe Yehlabathi II. Namhlanje iyunivesithi inamandla amakhulu kwizesayensi, kwishishini, kunye nobunjineli. Izifundo zixhaswa ngumlinganiselo we-14 ukuya ku-1 womfundi / ubuchule, kwaye abafundi abangaba ngu-90 bafumana uhlobo lwe-grant aid.
Ubhaliso: 2,851 (2,393 izifundo zakudala)
IYunivesithi yaseLouisana. I-Louisiana Ukuhamba / iFlickr / CC BY-ND 2.0
IYunivesithi yaseLouisana ye-Xavier ikwahlula ukuba yiyo kuphela i-HCBU kweli lizwe elinxulumene neCawa yamaKatolika. Iyunivesithi inamandla kwizenzululwazi, kwaye zombini i-biology kunye ne-chemistry ziyaziwayo. Iyunivesiti inomdla wokubaluleka kwezobugcisa, kwaye izifundo zixhaswa ngumlinganiselo we-14 ukuya ku-1 womfundi / umgaqo-faculty.
Indawo: eNew Orleans, eLouisana
Uhlobo lweziko: I -univesithi yobuninzi bobugcisa be-eyunivesithi ebambene neCawa yamaRoma Katolika
Ubhaliso: 2,997 (2,248 iiprogram)
Ubomi be-Emperor uJoshua Norton
Inkqubo yoBugcisa yesiGaba seBakala lesi-7
Izikhokelo eziKhuselekileyo zoLondolozo lwabaGoli
I-Lunar Eclipse iMilitary & Folklore
Igosa likaJohn Barleycorn
Ukutshatyalaliswa komlilo Inkcazo kunye nemizekelo
I-10 ehamba phambili yeTed Cruz Lines "kwi-Senate enkulu"